Haween lagu laayey Muqdisho iyo hub la qabtay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Haween lagu laayey Muqdisho iyo hub la qabtay
Haween lagu laayey Muqdisho iyo hub la qabtay
Inta la ogyahay 3 haween ah ayaa ku dhintay ku dhawaad 10 kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray ka dib markii ay ku qaraxday miino kuwa dhulka lageliyo ahayd xilli haweenkaasi ay ku mashquulsanaayeen hawlo dhinaca nadaafadda ah oo ay ka wadeen degmadda Hodan.
Joobjoogayaal tagay halkii uu qaraxu ka dhacay ayaa Wargeyska Xaqiiqa Times u sheegay in dumarka lala eegtay qarax loo sii galiyay qashin ay ka gurayeen waddada hormarta Carwo Caalami ee degmada Hodan halkasoo indhawaale ay ka socotay hawlo nadaafadeed.
Dhaawacyadda dumarkaasi ayaa intooda badan la gaarsiiyay cusbitaalka weyn ee Madiina oo iminka dhakhaatiirtu kula tacaalayaan. Hawl wadeenada caafimaadkuna waxay leeyihiin dumarka ayaa ah hooyooyin noloshoodda ka soo saaran jiray nadiifinta wadooyinka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay soo qabteen hub looga shikisanyahay in loo waday xarakadda Shabaab ka dib markii ciidamadda ammaanku ay hawlgal ka fuliyeen guri la bartilmaameedsanayay oo ku yaalla xaafadda Buulo Xuubay ee Muqdisho.
Sarkaal u hadlay waaxda dambi baarka wuxuu sheegay in gurigaasi laga helay hub, rasaas iyo dirays ciidan oo aad u fara badan.
Hawlgalka ayaa billowday ka dib markii sida la sheegay qaar ka mid ah dadweynaha xaafaddu ay digniino gaarsiiyeen ciidamadda ammaanka ee dawladda.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo ka mid ahaa mas’uulyiinta dawladda Soomaaliya ee goobtaasi gaaray ayaa bogaadiyay hawsha ay ciidamaddu qabteen isaga oo sidoo kale sheegay in agabkaasi ay dawladdu la wareegi doonto.
Previous articleHALGANKII QORISTA AF SOOMALAIGA
Next articleXasan Sheekh oo ka qeybgalaya shir madaxeedka Afrika iyo Mareykanka